Ngaba uyilo olungcono ubiza kakhulu? | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ngaba uyilo olulunge ngakumbi ubiza malini?
Umhlaba woyilo, njengakwiindawo ezininzi, uyonwabele umthambo othile, oko kukuthi, oko umntu unokusebenza yedwa, Ukufumana inzuzo enkulu ngaphandle kwesidingo sokuphendula kumanani okanye kwinkampani ngokubakho, iiakhawunti kunye nemigaqo yangaphakathi. Ukuzilolonga ngokukhethekileyo kunokuba luncedo kwaye kube yingozi, kodwa ngamafutshane, kumalunga enye yeendlela ezininzi zokuzilolonga indawo ethile yolwazi.
Umenzi mizobo ngumntu ophetheyo wokuphuhlisa iimodeli, iimveliso, amanani, ukuguqula imifanekisonjl. Ungumntu okhethekileyo ekusebenziseni imifanekiso kunye nokulungiswa. Imisebenzi yakho iyakwazi ibonakale kuyo nayiphi na imveliso enophawuNokuba kukutya, imveliso yococeko okanye impahla, kwaye ke, yiyo nayiphi na into enelebheli.
1 Ngaba umyili wegraphic kufuneka ahlawule malini?
2 Ngaba uyilo olungcono ubiza kakhulu?
Ngaba umyili wegraphic kufuneka ahlawule malini?
Ke, ekuqaleni kokuzilolonga okuthile, ezinye izinto ezinokubonakala ngathi zinokuvela: Ukunqongophala kwabathengi kwaye engazi iirhafu ezifanelekileyo emsebenzini wethu kwaye kungenxa yoku kusikelwa umda, abayili, njengaye nawuphi na umntu, bathatha isigqibo sokujongana nabo ukubiza amaxabiso aphantsi kakhulu, Ukukholelwa ekubeni oku kuya kuqinisekisa ubuncinci inani elibalulekileyo labathengi. Ngaba oku kuchanekile? Ngaba lolona qheliselo lulungileyo?
Kanjalo, Amaxabiso asezantsi aya kuba ngumtsalane omkhulu kubathengi kwaye oku kunokuba njalo kuyo nayiphi na indawo yolwazi. Kodwa nangona kunjalo, kuyakwenzeka ntoni xa sikubona kufanelekile ukunyusa amaxabiso ethu? ¿Inani labathengi liya kufana?
Siza kuqonda ukuba uninzi lwabathengi bethu babhenela kulo inkonzo yethu ngamaxabiso ethu hayi ngomsebenzi wethu kukodwa kwaye oko kunokusenza siwele kulwahlulo oluyingozi nakwinqanaba leengqondo, kuba siyakuqonda ukuba umsebenzi wethu (olungileyo okanye ombi) awunakuze uxatyiswe ngokwenene.
Kukho iingxaki ngaphakathi ekusebenziseni uyilo oluthile lwegraphic (kunye nakwezinye iindawo ezininzi ezenziwa ngendlela ethile) kwezi zinto, inqaku lanamhlanje liza kujongana nale ngxoxo ilandelayo:
Ngaba uyilo olungcono ubiza kakhulu?
Impendulo inokuba lula kwaye ekuqaleni umntu unokuthi umgangatho womsebenzi awuhambelani nangayiphi na indlela nexabiso efanayo okanye ngokusebenza komyili. Nangona kunjalo, kuyafuneka ukuba uye kulo mbuzo amatyeli aliqela, ucinga ngempendulo yethu, kuba, ngokwenene, uxabiseke kangakanani umsebenzi wethu? Ngaba ukhona umahluko phakathi kwexabiso elifanelwe ngumsebenzi wethu kunye nexabiso esicinga ukuba libiza?
Enye ye iindlela eziqhelekileyo zokufumana iingcebiso kumaxabiso emveliso okanye inkonzo ibonisana nemarike ngokubanzi, ijonga kwaye ihlalutye indlela yokuziphatha kwamaxabiso aloo mveliso. Kwaye kunjalo, yindlela esetyenziswa ngokubanziKuba ayinguye wonke umntu onolwazi olusisiseko kwimarike yabo.
Okulandelayo, ngokuqinisekileyo iyimfuneko "Nyusa udumo uye kulala”. Ewe, ukuba nodumo kunye nokulala ayikho enye into ngaphandle kokwenza umsebenzi olungileyo utshintshisa ngexabiso elifanelekileyo (kungabizi kwaye kungabizi), lixabiso elifanelekileyo ngokomsebenzi wethu. Isindululo ngokwaso sifuna ukwaziwa ngomsebenzi olungileyo, kuba, ekugqibeleni, abantu abazukukhathazwa kukuhlawula umsebenzi olungileyo, ucinga ngamanye amaxeshaIxabiso eliphantsi linokubiza".
Imalunga noku qwalasela imiba emininziKuba unokufuna ukuzibuza le mibuzo ngaphambi kokubeka ixabiso:
Inqaku lokuqala alithethi nto ngaphezulu kwaye akukho nto ingaphantsi misela ukuba unokuba nzima kangakanani umsebenzi Le nto siyiphathisiweyo kwaye oku kufanele ukuba kube nenjongo kangangoko, nokuba kunzima kangakanani okanye akunjalo, kuba sinokucinga ukuba umsebenzi othile unexabiso eliphantsi kuba sele siyazi ukuba mawenziwe njani, kwaye oku ngokuqinisekileyo umkhwa ombi.
Inqaku lesibini, ukukhawuleza kwabathengi. Kuqulathe ukubona ukuba ungxamiseko kangakanani (ngokwemiqathango yexesha) umsebenzi umenzela umthengi, kwaye oku kuthathela ingqalelo ukubakho kwethu kunye nexesha. Umsebenzi ukusukela namhlanje ukuya ngomso kufuneka ubize kakhulu kunomsebenzi namhlanje kwiveki ezayo, njengoko umxhasi engakuqwalaseli ukubakho kwethu.
Okokugqibela, kwinqaku lesithathu kungumbandela wokubona ukuba umthengi usithathela ingqalelo kangakanani na ukuba kufanelekile kulo msebenzi, ukuxhasa ukuqaphela kwethu kunye neengcebiso ngexesha lengxoxo yolwakhiwo lomsebenzi. Kungoko malunga noluhlu lwezikhokelo ekufuneka sizithathele ingqalelo ukungena kwilizwe lomsebenzi othile we ukuyila Kwaye nayo nayiphi na indawo yolwazi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ezahlukeneyo » Ngaba uyilo olulunge ngakumbi ubiza malini?
Le yinto endihlala ndiyibuza: Yimalini ukubiza umsebenzi wam?
Zininzi izinto ekufuneka ziqwalaselwe xa ubeka ixabiso emsebenzini wam kwaye yinto eyahlukileyo ukusuka emsebenzini kuye komnye. Into oyichaze kakuhle ngamagama ambalwa.
Okwangoku ndijongana nale nto kakhulu kwaye andibonisi ubuchwephesha obufanele ukuba ndibufanele kuba andazi ukuba ndingawuxabisa njani (kangangoko kunokwenzeka) umsebenzi wam kwaye ndiyawenza uwenze ube lixabiso eliphantsi.
Sele nditshilo ukuba andifuni ukuba ngumyili.
UJulius Caesar MO sitsho
Ngaba lukhona uluhlu lwamaxabiso kuyilo okanye ngaba umntu ngamnye ubiza into ayiqwalaselayo?
Phendula uJulio Cesar MO
Sebenzisa imizobo yevektha